Kuongorora & Kuyedza - Pandawill Technology Co, Ltd.
Yakasarudzika mhando, kuvimbika kwechigadzirwa uye kuita kwechigadzirwa chako kwakakosha kuwedzera kukosha kwechiratidzo pamwe chete nemugove wako wemusika. Pandawill yakazvipira zvizere kuendesa hunyanzvi hwehunyanzvi uye yepamusoro soro yebasa mukati memusangano wemagetsi. Chinangwa chedu kugadzira uye kuendesa zvigadzirwa zvisina hurema.
Yedu mhando Management manejimendi inoteverwa neakateedzana maitiro, maitiro uye kufambiswa kwemabasa, chikamu chakabatanidzwa uye chakasimbiswa zvakanyanya chikamu chedu mashandiro, inozivikanwa kune vese vashandi vedu. Pandawill, tinoratidzira kukosha kwekurasa marara, uye matekiniki ekugadzira matekinoroji, achibvumira kuti inyatsoita, uye zvakanyanya kukosha, nzira yekuvimbika uye yekuziva inogadzirwa.
Kutevedzera kwe ISO9001: 2008 uye ISO14001: 2004 zvitupa, isu takazvipira kuchengetedza uye kugadzirisa mashandiro edu zvinoenderana nemaindasitiri maitiro akanakisa.
Pandawill, isu tinoshandisa akati wandei nhanho yekutarisa kune yedu inobuda chigadzirwa. Kutanga pazvinhu zvinouya uye zvichizopera pakuiswa kwechigadzirwa chekupedzisira. Tine panzvimbo solder yekunamatira kudhinda kuongorora, Post kuiswa, Prereflow, Chekutanga Chinyorwa chekuongorora maitiro uye Automated Optical Kuongorora. (AOI) Kubva ipapo vanotariswa pasi pe microscope vasati vaenda pane inotevera maitiro. uye pakupedzisira tichizopedzisira tave muDhipatimendi redu reKutonga Kwemhando yepamusoro uko isu tine makore echiitiko uye chete ivo vanonyanya kukodzera QC vaongorori.
Kuongorora uye Kuyedza Kusanganisira:
✓ Yekutanga Yemhando Bvunzo.
✓ X-ray Kuongorora: bvunzo dzeBGAs, QFN uye isina maPCB.
✓ AOI Cheki: bvunzo dzekutengesa pasita, 0201 zvikamu, zvisipo zvikamu uye polarity
✓ In-Circuit Bvunzo: kuyedza kwakaringana kweakasiyana siyana eungano uye echinhu kukanganisa.
✓ Inoshanda bvunzo: zvinoenderana neyevatengi yekuyedza maitiro.